Maalinta: Diseembar 30, 2017
Faruk Guler, madaxa guud ee ESBAS, maamulaha kulanka ee Isuduwidda Isuduwaha Horumarinta Dhaqaalaha (IEKKK), ayaa shaqadiisa ku wareejiyay Selami Ozpoyraz, Madaxweynihii hore ee Golaha Golaha Ganacsiga Izmir. Shirka 75. ee Isuduwaha Horumarinta Dhaqaalaha Izmir (IEKKK), [More ...]
Guddoomiyaha gobolka Mahmut Demirtaş wuxuu la kulmay Agaasimaha TCDD ee Gobolka Oğuz Saygılı iyo mas'uuliyiinta kale ee la xiriiray wuxuuna halkaas ka siiyay warbixin kooban oo ku saabsan howlaha ay qabatay TCDD. Gaar ahaan Adana-Mersin iyo Adana-Toprakkale mashaariicda tareenka xawaaraha sare [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, ayaa sheegay in Mashruuca Tareenka Tareenka ee Istanbul-Europe uu ahaa Çerkezköydhalleeceeyay in Çorludan uu sii socon doono, “Markii aan nimid bishii Janaayo ee sannadkan, waxaan isaga u ballanqaadnay, waxaan bilownay hawsha hindisada.” Arslan, [More ...]
Wasiir Arslan: ma Waxaan dooneynaa inaan dhameystirno Ankara-Sivas YHT Line dhamaadka 2018
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 29 Diseembar 2017 Shir jaraa'id oo lagu qabtay Xarunta Telecom ee Turkiga ee Ahlatlıbel, Ankara jimcihii, 2017 wuxuu qiimeeyay waxqabadka Wasaaradda 2018 wuxuuna ku dhawaaqay bartilmaameedka XNUMX. KU SOO DHAWAADA DHAQANKA BULSHADA [More ...]
Kardemir wuxuu dhammeystiray qandaraaska laba maalgashi oo deegaanka ah wuxuuna go'aamiyay shirkadda qandaraaslaha ah. Iyada oo la raacayo oggolaanshaha la siiyay Agaasinka Guud ee go'aanka Guddiga Agaasimayaasha ee Kardemir kulanka 26.12.2017, [More ...]
Kirada ugu weyn ee taariikhda ayaa ka soo baxday kanaalka Istanbul!
Xubin ka tirsan baarlamanka CHP Nadir Ataman Kanal ayaa sharaxay in Istanbul aysan ahayn mashruuc biyo mareen ah laakiin ay tahay mashruuca kirada ugu weyn ee taariikhda jamhuuriyada. [More ...]
Jawaab xiiso leh BIMER'S A Ma jiraan wax dhibaato ah: Waxaanu kaa rajeynaynaa inaad aragto Marmaray!
Kocaeli Duqa 'cab' darawallada çatkap ee 'Sidee jawaab xiiso leh ka bimer su'aasha geli karto ... xaflada furitaanka Madaxweynaha Tayyip Erdogan, ayaa driverless horeysay Turkey ayaa xanbaarsan kala soocin ah in line metro khadka tareenka Üsküdar-Ümraniye [More ...]
Sannadka Cusub ee loo yaqaan "Tramways and Buses" ee Kocaeli
Kocaeli Magaalo-Weyne ee Gaadiidka Dadweynaha, 31 Diseembar 2017 Axad, 1 Janawari 2018 Isniinta, Sannadka Cusub ee Isku xirka taraamyada iyo basaska, oo ay ku jiraan adeegyo dheeri ah. SANADKA CUSUB [More ...]
Howlaha ka hooseeya Bosphorus ee saddexda dabaq ee Istanbul Grand Tunnel wuxuu ku socdaa xawaare buuxa. Qandaraaska dhismaha tunnel-ka ayaa lagu qaban doonaa 2018 üçüncü Kadib marinka Marmaray iyo Eurasian, midka saddexaad ee laga dhisi doono Bosporus [More ...]
Turkey waa mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka muhiim ugu ayaa dib loo eegay mar wiishashka ski saacadaha Uludag ah. Kuwa doonaya inay aadaan Uludağ inta lagu gudajiro sanadka cusub, gaariga fiilada ayaa socon doona illaa 02: 30 habeenkii. Maamulaha Gawaarida Bursa Cable Erdal Er ayaa yidhi, [More ...]
Lacagta 2018 TL waxaa lagu maalgelin doonaa tareenada 14,2
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa qabtay shir jaraa'id si ay uga wada hadlaan sanadka 2017. Wuxuu sidoo kale sameeyay bayaan ku saabsan bartilmaameedka sanadka 2018. Arslan, bilyaneerka 15 ee khudbaddiisa sanadkii ugu dambeeyay ee 380 [More ...]
Wagon Holders oo ka socda TCDD Tasimacilik AS
Wakaaladda Tareenka ee ERADIS -European ee loogu talagalay saxiixa wadajirka ah ee heshiiska ku lifaaqan ee Aqoon-isweydaarsiga ku saabsan Xogta is dhexgalka iyo Badbaadada- inta u dhaxaysa taariikhaha 02-03 / 01 / 2018 ee loogu talagalay saxiixa Masuuliyiinta Aqoon-isweydaarsiga ee leh Zilyets. [More ...]
Shuruucda Wax ka badalida Sharciyada Waxyeelada ee Wadada Tareenka ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa dhaqan gashay kadib markii lagu daabacay arrinta nuqulkii rasmiga ahaa ee Gazette. XEERARKA KU SAABSAN AAMIINTA SIYAASADAHA AMMAANKA RAILWAY EE RAILWAY [More ...]